अमेरिकी राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार जो बाइडन को हुन्? – Karnalisandesh
अमेरिकी राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार जो बाइडन को हुन्?
प्रकाशित मितिः १९ कार्तिक २०७७, बुधबार ०७:५१ November 4, 2020
काठमाडौँ। बराक ओबामाका उपराष्ट्रपति रहेका बाइडनलाई डेमोक्र्याटिक पार्टीले नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवार बनाएको छ।
तर उनका विरोधीहरूका निम्ति बाइडन संस्थापनसँग जोडिएका डाँडापारिका घामू हुन् जसले बेलाबखत लाजलाग्दो गल्ती गर्छन्। ९महिलाहरूको कपाल सुँघ्ने जसको अचम्मको बानी पनि छ। के ट्रम्पलाई हराउन आवश्यक क्षमता उनमा छ त?
‘जो बाइडनले राजनीतिमा पहिलो पाइला चाल्दा अहिलेका कैयौँ मतदाता जन्मिएका पनि थिएनन्’
जो बाइडन चुनाव प्रचारका पुराना खेलाडी हुन्। उनको वाशिङ्टनसँगको नाता ४७ वर्षअघि सन् १९७३ मा जोडिएको थियो जब उनी अमेरिकी सिनेटका सदस्य बने। अनि उनको पहिलो राष्ट्रपतीय प्रचार अभियान ३३ वर्षअघि सन् १९८७ मा भएको थियो।
उनी मतदातालाई आकर्षित गर्न सक्ने स्वाभाविक नेता हुनुका साथै कुनै पनि बेला गलत वाक्य बोल्न सक्ने नराम्रो क्षमता भएका मानिस पनि हुन्। भिडका सामुन्ने बोल्दाबोल्दै चिप्लिँदा उनको पहिलो प्रचार अभियान सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै खेर गएको थियो। यो उनको तेस्रो अभियान हो।
तस्बिरको क्याप्शन,‘बाइडन सक्षम तथा प्रखर सार्वजनिक वक्ता हुन् तर उनी कहिलेकाहीँ नराम्रो समाचारको सामग्री बन्छन्’
पछि ‘जो बम’का नामले परिचित भएका यस्ता विभिन्न गल्तीको शृङ्खलाको त्यो पहिलो कडी थियो। सन् २०१२ मा आफ्नो राजनीतिक अनुभवबारे बखान गर्दै उनले आफ्नो भाषणमा भने, “मैले आठ जना राष्ट्रपतिलाई चिनेको छु, तीन जनालाई त अत्यन्त निकट रूपमा।’ विचारनगरी उनले भनेको कुरालाई निकट मित्रता मात्र नभई यौन सम्बन्ध रहेको रूपमा समेत अर्थ्याउन सकिन्थ्यो।
तस्बिरको क्याप्शन,‘सन् २००९ देखि २०१७ को बीच बाइडन बराक ओबामाका उपराष्ट्रपति थिए’
तस्बिरको क्याप्शन,‘मतदाताहरूसँगको भेटघाटमा बाइडन निकै सहजरूपमा प्रस्तुत हुन्छन्’
तस्बिरको क्याप्शन,‘बाइडनले अमेरिकी सिनेटका चुनाव सात पटक जितेका छन्’
“उनी मानिसहरूसँग अङ्कमान गर्छन्, बोल्छन्, छुन्छन् र त्यो सबै वास्तविक हुन्छ। कृत्रिम हुँदैन,” पूर्वविदेशमन्त्री तथा राष्ट्रपतिका पूर्वउम्मेदवार जन केरीले न्यूयोर्कर पत्रिकालाई बताए। तर उनको स्पर्श गर्ने बानीलाई लिएर कतिपय प्रश्न उठेका छन्।
तस्बिरको क्याप्शन,‘उनको व्यवहारलाई लिएर महिलाहरूबाट बाइडनले कैयौँ आरोप खेपेका छन्’
गत वर्ष बाइडनले आफूहरूलाई अनुचित रूपमा स्पर्श गरेको, अँगालो हालेको वा चुम्बन गरेको भन्दै आठ महिलाले आरोप लगाए। अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले बाइडनले कसरी सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित महिलाहरूसँग निकट भावमा व्यवहार गर्छन् र कसरी उनीहरूको केश सुँघेको जस्तो गर्छन् भनेर पनि चित्रण गरे।
प्रतिक्रियामा बाइडनले आगामी दिनमा आफ्नो व्यवहारलाई लिएर होस पुर्‍याउने बताए। तर मार्च महिनामा तारा रिड नामक महिलाले ३० वर्षअघि आफूलाई बाइडनले भित्तामा घँचेटेको र यौन आक्रमण गरेको आरोप लगाइन्। त्यतिखेर उनी बाइडनको कार्यालयमा सहयोगी कर्मचारी थिइन्।
तस्बिरको क्याप्शन,‘पछिल्ला वर्षहरूमा “पीडितलाई विश्वास गरौँ” भन्ने साझा नारा बनेको छ’
तर यस्तो विषयमा सङ्ख्याको खेल खेल्नुहुन्छ र ?
“उनी आफैँले केही भनेका छैनन् तर उनको प्रचार समूहले आडम्बर प्रदर्शन गरेको छ।” बाइडनको प्रचार कार्यालयले ती भनाइ अस्वीकार गरेको छ।
तस्बिरको क्याप्शन,‘उम्मेदवारको रूपमा हिलरी क्लिन्टन अझ अनुभवी थिइन् तर सन् २०१६ को चुनावमा डोनल्ड ट्रम्पले उनलाई पराजित गरिदिए’
वाशिङ्टनमा उनको धेरै अनुभव छ। सिनेटमा तीन दशकभन्दा धेरै अनि ओबामाको उपराष्ट्रपतिको रूपमा आठ वर्ष। तर यस्ता अनुभवले विगतमा काम नगरेका पनि कैयौँ उदाहरण छन्।
तस्बिरको क्याप्शन,‘सन् २००८ मा ओबामाले उनको चुनाव विषय परिवर्तनको वाचामा केन्द्रित गरेका थिए तर बाइडनलाई त्यही कुरा फेरि गर्न गाह्रो पर्नेछ’
अर्थात् ह्वाइट हाउसमा पुगेर राजनीतिक संस्थापनमा फेरबदल गर्ने वाचा गर्नेहरूले मत पाएका छन्। तर, त्यस्तो वाचा गर्न बाइडनलाई भने असम्भव हुनेछ किनभने करिब ५० वर्षदेखि उनी उच्चस्तरको राजनीतिमा संलग्न भइआएका छन्।
तस्बिरको क्याप्शन,‘सन् १९८७ मा बाइडनले पहिलो पटक राष्ट्रपति पदका निम्ति आकाङ्क्षी बनेका थिए’
गत केही दशकयता अमेरिकाका हरेक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रममा बाइडन या त संलग्न छन् या त त्यसबारे केही टिप्पणी गरेका छन्। अहिलेको राजनीतिक वातावरणमा ती कतिपय निर्णय उचित नदेखिन सक्छ।
ओबामाको कार्यकालमा रक्षामन्त्री रहेका रोबर्ट गेट्सले बाइडनबारे गरेको एउटा टिप्पणीलाई पनि रिपब्लिकनहरू सम्झाइरहन्छन्। विगत चार दशकमा विदेशनीति तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित लगभग प्रत्येक महत्त्वपूर्ण निर्णयमा बाइडन गलत ठहरिएको तर पनि उनलाई नरुचाउन भने नसकिने गेट्सले बताएका थिए। यो अभियानका बेला यस्ता थप विषय अगाडि आउन सक्छन्।
तस्बिरको क्याप्शन,‘बाइडनकी पहिलो पत्नी नेलिया र उनीहरूका छोरीले कार दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका थिए’
तस्बिरको क्याप्शन,‘बाइडनका छोरा बोले डेलावेर राज्यका महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए र साथै सैनिक अधिकारीको रूपमा इराकमा खटिएका थिए’
सन् २०१५ मा ४६ वर्षको उमेरमा मस्तिष्कमा ट्यूमरका कारण बो बाइडनको निधन भयो। आफ्नो परिवारका त्यति धेरै सदस्य गुमाएका बाइडनप्रति सर्वसाधारण अमेरिकीमा सहानुभूति छ। तर उनका अर्का छोरा हन्टरसँग भने अर्कै कथा जोडिन्छ।
तस्बिरको क्याप्शन,‘हन्टर बाइडनले पिताको राजनीतिमा जटिलता उत्पन्न गरिदिएका छन्’
हन्टर पहिले वकिल थिए। पछि उनको व्यक्तिगत जीवन समस्याग्रस्त भयो। उनको पहिलो पत्नीले उनले लागुऔषध तथा मदिरा प्रयोग गर्ने गरेको अनि मोजमस्तीमा लागेको विषयलाई सम्बन्धविच्छेदको कारणको रूपमा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उनलाई जलसेनाले कोकिन प्रयोग गरेको पाएका कारण निकालिदिएको थियो।
तस्बिरको क्याप्शन,‘राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि महाभियोग लगाइएको थियो तर पछि सिनेटले सफाइ दिएका कारण उनलाई हटाइएन’
त्यही फोन कलका कारण ट्रम्पमाथि हालसालै महाभियोग लगाइयो। सिनेटले रोकेका कारण ट्रम्पको पद भने गुमेन। तर यसले सिर्जित राजनीतिक विवादमा आफू नमुछिएको भए हुने बाइडनलाई लागेको हुनसक्छ।
तस्बिरको क्याप्शन,‘बाइडनसँग विश्वमञ्चको धेरै अनुभव छ’
तस्बिरको क्याप्शन,‘हारेपनि जितेपनि बाइडनको राजनीतिक जीवनको यो अन्तिम अध्याय हुने देखिन्छ’
महामारी व्यवस्थापनसँग जोडिएको अनुहार ढाक्ने मास्कको प्रयोगको विषय समेत राजनीतिक मुद्दा बनेको छ। बाइडन बारम्बार मास्क लगाएर सार्वजनिक रूपमा देखा परिरहन्छन् भने ट्रम्पले त्यसको विपरीत गतिविधि गरेका छन्।
केही वर्ष अघि उनलाई सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने कि नहुने भनी प्रश्न गरिँदा बाइडनले भनेका थिए: “राष्ट्रपति नबनीकनै पनि म खुसीखुसी यो संसारबाट बिदा हुनसक्छु।” अब त्यो स्थिति भने रहेन।